Semalt Expert momba ny fitantanana tsara indrindra & ampahany; Laharam-pejy Sales ho an'ny mpampiasa WordPress
Semalt Expert momba ny fitantanana tsara indrindra & ahany; Laharam-pejy Sales ho an'ny mpampiasa WordPress
Raha mitombo be ny tranokala WordPress na ny orinasa an-tserasera, dia mila ilainao hampiorina ny foto-kevitra WordPress anao haingana araka izay azo atao. Ary noho izany dia mitaky loham-boninahitra voalanjalanja tsara ianao ary pejy mahavariana mahavariana hahatonga ny fehin-kevitra matanjaka. Misy karazana pejy roa maneran-tany: pejy mitondra ny loham-pitenenana ary tsindrio amin'ny pejy fitaterana. Ny tranonkala e-commerce amin'ny aterineto dia tokony hanana namana sy manana endrika tsara. Ny tena zava-dehibe dia mila manana pejy mivarotra mahasoa izy io. Raha tsy manana tolotra Wordline Premium na maoderina ianao dia tsy ho afaka hampiasa mpanjifa betsaka kokoa noho ny fahatsapan'ireo mpiserasera ho sahiran-tsaina sy kivy rehefa miezaka mividy ny tranokalanao.
Oliver King, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia mijery ny lisitry ny pejy tsara indrindra sy ny pejy momba ny fivarotana ho an'ireo mpampiasa WordPress:
Ity lohahevitra ity dia novolavolain'ireo FancyThemes ary tonga miaraka amin'ny pejy fanentanana matanjaka sy mahatalanjona izay natao hampitombo ny resadresakao. Ity lohahevitra ity dia mampiasa ny endriky ny soratra sy ny sary lehibe ary manampy antsika hanaraka ireo fepetra momba ny pejy fananganana avo lenta. Ambonin'izany, mampitombo ny fidiram-bolan'ny orinasanay izany. Ny pejy fanentanana Solopreneur dia ampahany amin'ity lohahevitra manontolo ity; Midika izany fa tsy mila mampiasa vola sy fotoana hampidirana ireo pejy mitoka-monina ianao amin'ity lohahevitra ity.
JustLanded dia fantatra amin'ny fomba fijery tsara sy ny fahaiza-manaony hanomezany ny etiôstika. Ity dia lohahevitra iray mahafinaritra ary mamela antsika hamorona pejy fananganana avo lenta sy fivarotana mora foana.
, ary amin'ny alalan'ny fampisehoana ny karazan-drakitra rehetra, ny fampiroboroboana ny votoatiny amin'ny sokajy samihafa ary hampifanaraka ny habeny rehetra
Ny Launchkit dia iray amin'ireo pejy tsara indrindra sy pejy momba ny fivarotana ho an'ny tranokalan'ny WordPress. Manao ny tranga mivaingana ho an'ny tenany izy ary manitsy ny tranokala e-commerce amin'ny fomba tsara. Ity lohahevitra ity dia manampy anao hampamirapiratra ny tetikasanao amin'ny fanomezana anao safidy maro isan-karazany. Hahafaham-po tokoa ny fananganana tranokala tsara ho anao ary hitondra fitarihana maro be. Ity loha-hevitra matanjaka sy tompon'andraikitra ity dia mamela anao handamina karazana fitarihana sy A / B fitsapana, izay ahafahana mamaky ny habe rehetra.
Inona no mahatonga ny sehatra fanararaotana tsara?
Ny iray amin'ireo zava-dehibe tokony hikaroka amin'ny pejy fanentanana na lohahevitra momba ny fivarotana dia ny namolavola ny loha-hevitra ary izany dia avo lenta na maimaim-poana. WooCommerce dia iray amin'ireo tetikasa WordPress tsara indrindra sy malaza indrindra ary manana karazana endri-javatra toy ny sary avo lenta, flexibility to customize, ary mamaly ny habeny rehetra. Ataovy azo antoka fa ny foto-kevitra nofidinao dia ireto manaraka ireto: 10)
Safidy momba ny famoronana sehatry ny mpikambana sy ny pejy fananganana.
Fampisehoana an-tserasera ny votoatin'ny tranonkala toy ny sary mihetsika sy ny fampisehoana.
Tokony hifanaraka amin'ny fitaovana rehetra misy fanapahan-kevitra samihafa.
Tokony hanana sehatra SEO hampidirina ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana ianao.
Famaranana sy fanampiny fanampiny handinihana:
Raha vao nifidy ilay foto-kevitra ianao, dia tsy maintsy niasa tamin'ny famolavolana drafitra sy ny loko azonao antoka fa ny lohahevitra dia mifanaraka amin'ny takian'ny nicheo sy ny takian'ny orinasa. Ara-teknika, ny hakanton'ny loha-hevitra WordPress sy ny safidiny dia tena zava-dehibe. Azonao atao ny mametraka plugins roa mba hanatsarana ny laharan'ny tranonkalanao ary hanome fampahalalana mahasoa ho an'ireo mpamaky anao mba hamadika azy ireo ho mpanjifa sambatra Source .